Akụkọ - Nlata Mbelata Teknụzụ - Ajụjụ Ọnụ: “Digitization Na-emepụta nghọta dị elu”
Getecha Onye isi nchịkwa Burkhard Vogel banyere 4.0lọ ọrụ 4.0 na Granulating Technology N'ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe plastik, njikọ njikọta nke teknụzụ granulation na ịkpụzi ọgwụ, extrusion, ịkpụzi ịkpụzi na usoro thermoforming na-aga n'ihu ngwa ngwa. Onye na-emepụta granulator bụ Getecha zara omume a n'oge na-adịbeghị anya ma ugbu a, ọ na-akwadebe hopper na granulators dị egwu nke usoro "RotoSchneider" ya na ọtụtụ ọrụ nwere ọgụgụ isi dịka njirisi ụlọ ọrụ 4.0. Onye isi nchịkwa Burkhard Vogel kọwara na N'ajụjụ ọnụ ihe dị mkpa.
Maazị Vogel, kedu ka ịkwado ndị na-akpọ Getecha na ụlọ ọrụ 4.0 si arụ ọrụ dị mkpa ugbu a maka ndị injinia mmepe gị? Burkhard Vogel: Na mgbakwunye na amụma ọhụụ na-aga n'ihu maka ịwepụta ihe ndị mejupụtara etiti maka ndị rotors, ebe a na-egbutu ya yana sistemụ na-akwụ ụgwọ na nrụpụta, mmepe nke ọrụ 4.0 bara uru maka ndị na-arụ ọrụ anyị. dị oke mkpa, ọkachasị n'ime afọ atọ ma ọ bụ afọ anọ gara aga. Nke a metụtara usoro na obere na kọmpat n'akụkụ pịa granulator usoro yana nnukwu Central granulators na infeed granulators. Kedu ihe ị chere kpatara oke ebe a? Vogel: Ma ị tụlere ụlọ ọrụ ụgbọ ala na ndị na-eweta ya, imepụta ihe nkwakọ ngwaahịa ma ọ bụ ngalaba buru ibu nke ngwaahịa ndị ahịa - na ụlọ ọrụ niile ọchịchọ maka inwekwu akụrụngwa na-akpali usoro dijitalụ nke usoro nrụpụta. The mmezu nke ihe owuwu dị ka ụkpụrụ nke Industrylọ ọrụ nke 4.0 anaghị akwụsị na ubi nke ihe oyi na granulation technology. Ndi injinia anyi ghotara ihe a otutu afo gara aga, nke mere na anyi enwego ike iwulite uzo di nkpa na mpaghara a ma nwee ike kwadebe ndi RotoSchneider granulators ya na otutu ozi di omimi na njikota ozi.
Nwere arụ ọrụ 4.0 a na-arụ ọrụ ugbu a akụkụ nke ọkọlọtọ akụrụngwa nke granulators? Vogel: Ọ bụghị n'ọnọdụ niile. Ọrụ ụlọ ọrụ 4.0 na-abanye naanị na ndị ahịa mgbe ọ chọrọ itinye teknụzụ granula na usoro arụmọrụ ya nke usoro plastik. Mgbe nke a mere, ihe ọmụma na nkwukọrịta teknụzụ nkwukọrịta nke ndị na-ebu ọka n'ime akụrụngwa na-emepụta teknụzụ na-arụ ọrụ dị mkpa, nke mere na arụmọrụ ha na nnweta ha nwekwara ike ịchekwa na ọkwa dijitalụ. You nwere ike ịkọwa okwu banyere akụkụ a karịa? Vogel: Cheedị ihe nhazi plastik na ebumnuche nke ịtinye otu ma ọ bụ ọtụtụ n'ime etiti anyị ma ọ bụ n'akụkụ ndị na-ede akwụkwọ akụkọ n'ime usoro ihe eji arụ ya na usoro imepụta akpaaka site na iji eriri ebu, ngwaọrụ ndị agbagọ, ọdụ ụgbọ mmiri na usoro ndị ọzọ, na iji weghachite ihe mkpofu na ihe mkpofu na mmepụta site na usoro ntughari na ụzọ nchekwa. . akụkụ nke ọrụ dị otú ahụ, ụdị atụmatụ 4.0 dị iche iche na granulators anyị nwere ike ịnye ọrụ bara uru. Nke a bụ n'ihi na ọ bụghị naanị na-akwado njikarịcha usoro na-aga n'ihu, mana ọ na - enyekwa mmesi obi ike dị mma, na - enye ohere nlekota nke usoro yana ọ nwere ike meziwanye nnweta usoro mmepụta. Kedu ọrụ ụlọ ọrụ 4.0 kwesịrị ịnwe granulator n'ụzọ ọ bụla? Vogel: Ekpebiri nke a dabere na ihe achọrọ maka ọrụ na ebumnuche ndị ahịa. Ọtụtụ ihe ga - ekwe omume ugbu a n'ihi na anyị na - eji ọtụtụ ohere nke ihe mmetụta ọhụụ na teknụzụ na - arụ ọrụ yana ọtụtụ sistemụ ụgbọ ala emebere emepe. N’ụzọ dị otu a, enwere ike ịpịpụta, dọkụmentị, hazie, hụ anya ma lelee ọtụtụ igwe dị mkpa yana igwe data. Have nwere ihe atụ nke a? Vogel: Ọ bụrụ na a hazie mgbanwe mgbama n'etiti granulator na ahịrị mmepụta, a ga-edekọ ma tụọ ọkwa niile, omume na ihe omume niile. Dabere na nke a, enwere ike ịkọwapụta ọnọdụ dị oke egwu yana ọkwa ịdọ aka na ntị akọwapụtara na sistemụ njikwa njikwa ọkwa dị elu, nke na-amalitezi usoro kwesịrị ekwesị na usoro mmezi na mmalite. Tụkwasị na nke a, ọ ga-adị mma ka ịdekọ usoro arụmọrụ niile dị mkpa na isi ihe dị mkpa nke granulator - dị ka ntụgharị ma ọ bụ ịdị mma nke ihe ala - ma ziga ha na Data Opequis aquisition or Major Diagnostic Category sys - tems nke ihe nhazi plastik maka nyocha ọzọ. Nke a metụtakwara oge, oriri ike, arụmọrụ arụmọrụ na ọtụtụ mpaghara ndị ọzọ site na ọrụ nke ndị granulators. Anyị nwekwara ike ịhazi ka ekwusara ozi sistemụ niile na kọmputa nnabata ma debe ya ebe ahụ maka nyocha yana akwụkwọ. . Nke a ga - eme ka enwee nghọta zuru oke banyere arụmọrụ nke sistemụ arụmọrụ. Ya mere onye na-ahụ maka ihe ọkụkụ na-enwetakwa data na njirimara nke usoro dị mkpa na mmelite mma? Vogel: Zie ezi. Obughi ihe ozo n'ihi na akuku nke ihe omuma data nke a na-akowa site na mgbanwe mgbaàmà n'etiti uzo mmeputa na osisi granulating di kwa maka oru oru 4.0, nke na enyere ihe a na-akpọ Monitoring Predictive ma mee ka osisi nweta. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ ozi anakọtara nwere ike ịkwadebe maka mmezi amụma ma weghachite site na ngwaọrụ Getecha remote. Maka ebumnuche a, enwere ike ijikọ granulators ma tinye ya n'ime akụrụngwa MRO nke ndị ahịa. Ihe omuma nke enwetara site na nke a na-abanyekwa n'ime katalọgụ nchọpụta nsogbu nke "akwụkwọ ntuziaka" agbakwunyere nke ndị granulators Getecha. Usoro nchịkwa nchịkwa nke igwe mmepụta nwere ike igosipụta onye ọrụ a ozi a. Kedu ụdị ụlọ ọrụ 4.0 doro anya Getecha na-arụ ọrụ ugbu a? Vogel: Ọfọn, ndị a bụ ọrụ na-aga n'ihu na ndị ahịa, enweghị m ike ikpughe ọtụtụ ihe gbasara ha. Mana enwere m ike ịgwa gị na ọ bụrụ na ọ bụ maka mkpofu sitere na mbupu nke akwa polypypylne, akụkụ ndị na-ezighi ezi site na thermoforming nke capsules ego ma ọ bụ ihe mkpochapu site na imepụta ihe nkiri - n'ọtụtụ ebe Getecha granulators na Ọrụ 4.0 ọrụ ugbu a. akụkụ guzosiri ike nke usoro mmepụta. Dijitalụ - na mgbakwunye na nhọpụta nke ndị rotor kwesịrị ekwesị, draịva, hoppers na ọtụtụ ihe ndị ọzọ - bụzi isi ihe na - eme ka ndị ahịa anyị gbadoro ahịa nke granulators anyị. . anyị na-atụsi anya ike na isiokwu a ga-aga n'ihu na ọ dị mkpa n'ọdịnihu
Igodo igwe bụ ọkachamara soplaya maka mmepụta akara na ubi nke plastic extrusion ụlọ ọrụ.
Anyị na-enyere ụlọ ọrụ ndị ahịa aka ịkwalite mmepụta na ngwaahịa Pvc Extruder ha.
Post oge: 2021-03-04